I-Apple ijolise kwiphulo lentengiso elitsha kwi-iPhone 7 Plus | IPhone iindaba
I-Apple ijolise kumkhankaso wentengiso omtsha kwi-iPhone 7 Plus
Okwangoku sikwelinye lamaxesha sinentengiso engaphezulu yolu hlobo lwesixhobo, hayi kuba iimveliso ezininzi zithengisiwe, kodwa ngokuchaseneyo, kufuneka sikhuthaze abasebenzisi kwaye sibanike izizathu zokuba babambe izixhobo ezizithandayo ngaphandle kokujonga ngasemva. kwaye ngaphandle kwesizathu seKrisimesi kunye nosuku lweValentine sele luphelile, sinezizathu ezimbalwa zokutshintsha isixhobo esiphathwayo ngaphandle kokwenza nje ukuthanda. Kodwa… Ngubani ongathandiyo ukuthatha umfanekiso olungileyo kwi "portrait mode"? Leyo yintsika ephambili yamaphulo amatsha e-Apple malunga ne-iPhone 7 Plus.
Udinga imizuzwana elishumi elinesihlanu kuphela ukubona ukuba iApple iyakuthethelela njani ukusetyenziswa kwe "mode portrait" ekhethekileyo ye-iPhone 7 Plus. I-Apple ibotshelelwe luthando, kwaye kukuba kuyo sifumana ngokukhawuleza umahluko phakathi kwefoto eqhelekileyo okanye ifoto kwi "portrait mode" yesoka lakho. Ividiyo ngoku iyafumaneka kwisiteshi seYouTube esiqhutywa yiApple, kwaye ayikafikeleli kusasazo oluphambili lwethelevishini eSpain, nangona singathandabuzi ukuba kuya kuthatha ngaphezulu kwenyanga ukuqala ukwanda. Indlela enomdla wokucacisa ikhamera elungileyo ye-iPhone 7 Plus.
Kule vidiyo yesibini, nemizuzwana elishumi elinesihlanu ubude, ayibhekiseli kwisithandwa / intombi, kodwa kwinto ethathwa njengefoto elungileyo kunye nento engekhoyo. Ngale nto basibonisa ifoto ethathwe kwimowudi yekhamera ezenzekelayo, kwaye uyithelekise nento eya kuba "yifoto elungileyo", leyo ithathwe ngemowudi yomfanekiso.
Asikholwa ukuba lo msebenzi wekhamera ngowona mthombo uphambili wokufumana i-iPhone 7 Plus, nangona kunjalo, zizinto ezipheleleyo ezinokukuqhubela ekugqibeleni ufumane indoda enkulu yosapho lwe-Apple iPhone.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » I-Apple ijolise kumkhankaso wentengiso omtsha kwi-iPhone 7 Plus
I-Apple iphefumlelwe yiposta yoMnyhadala weMalaga ukubonisa iWWDC17
I-Apple Pay iyahlala eSpain kwakhona